‘माओवादी केन्द्रमा फर्किनुस्, नभए राजीनामा दिनुस्’ – Khula kura
भन्न त ताजा जनादेश लिन भन्नुभयो तर केका लागि जनमत लिने ? समाजवादतिर जान्छौं भन्ने जनमत झण्डै दुई तिहाई छ । पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले लैजान्छौं भन्ने हो भने जनमत दुई तिहाई छ ।
अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन, विकास, सुशासनमा जनमत छ । त्यसो हो भने चुनावबाट लिन खोजेको जनमत के हो त ? पछाडि फर्किन खोजेको भन्ने प्रष्ट छ । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेर संसद पुनर्स्थापना गरेपछि हाम्रो संविधान बच्यो, राजनीतिक प्रणाली बच्यो ।
जहाँसम्म माधव नेपाल समूहको कुरा छ, उहाँहरुसँग हामी विद्रोह गर्छौं भन्ने विकल्प थियो । कानूनी निर्णय मान्दैनौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेका छौं, त्यसलाई नै नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउँछौं भन्न सक्नुहुन्थ्यो । यो राजनीतिक निर्णय हुन्थ्यो । उहाँहरुको विचार, सोच मिल्ने माओवादी केन्द्रका साथीहरुसँगै हो ।
तर हामीसँग दशौं लाख जनता छन्, संघीय संसदमा साथीहरु हुनुहुन्छ । चार वटा प्रदेशमा उहाँहरुका बहुमत छ । स्थानीय तहमा हजारौं साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ । त्यसैले पार्टीभित्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक गरौं भनेर हिजो पनि बहस गरेकै हो, आज पनि गर्छौं । यो जिम्मेवार प्रयत्न हुन्छ भन्नुभयो ।
ओलीजी एकताविरुद्ध जानुभएको छ, हिजोको प्रतिवद्धताविरुद्ध जानुभएको छ । जनतामा गरेको प्रतिवद्धता साझा घोषणाभन्दा पनि पछाडि हट्नुभएको छ ।
त्यसैले यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन कोशिस गर्छौं, कानूनी र राजनीतिक लडाईंबाट अगाडि बढ्छौं भन्नुभएको छ । उहाँहरुको स्वतन्त्र निर्णयको हामी सम्मान गर्छौं र विचार, राजनीति मिल्दा सहकार्य पनि गरिरहन्छौं ।
फेरि नेकपा एमाले भनेको त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसालहरुको पनि त हो नि । हिजो पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाउँदा एमाले बिसर्जन गरेको, जनताको बहुदलीय जनवादलाई जनताको जनवादमा विलय गरेको केपी ओलीजीले हो ।
त्यसैले उहाँहरुले पेलाइमा पर्नेभन्दा पनि कानुनी रुपमा तत्कालीन एमालेको ठाउँमा पुगेपछि सबैको एमाले हुन्छ ।
माओवादी केन्द्र पनि रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरुको पनि हो । हिजो नेकपाभित्र मतभेदले एकतिर ध्रुबिकृत हुनुभयो ।
आज कानुनी रुपमा अर्को ठाउँमा पर्‍यौं, मतभेद भए पनि यहीँ छलफल गर्छौं भन्नुभयो हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले सार्वजनिक र व्यक्तिगत रुपमा पनि आउनुस्, केही छैन राजनीतिमा उचार चढाव भइराख्छ भनेका छौं ।
दोस्रो, फरक स्कुलिङको । एमालेसँग एकता भएकाले आफ्नो सबल र दुर्बल पक्ष थाहा भयो । तेस्रो, अहिले पनि माओवादीमा प्रचण्ड र वरिपरि भएको नेतृत्वले यसो गरौं भन्दा मान्ने पङ्ती नै छ ।
हिजो जनयुद्धबाट आएको, दुःख कष्ट गर्न सक्ने, दशौं हजार मध्यम तहका युवा नेताहरुको पङ्ती छ । र, यसलाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गरेर परिचालन गर्ने हो भने यो देशको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने आधार छ । विचार छ, राजनीति छ, दशौं हजार कार्यकर्ता छन् र पछिल्ला निर्वाचन हेर्दा १५/१६ लाख स्थिर जनमत छ ।
अब माधवकुमार, झलनाथ, घनश्याम भुसालहरु गएर ‘ओली बा आई लभ यू’ त भन्नुहुन्न, ठूलठूला फोटो बोकेर पनि हिँड्नुहुन्न । विधि-पद्धतिको बहस, सामूहिकताको बहस हुन्छ होला
त्यसैगरी ६४ प्रतिशत सांसद भएको, आफूले जस्तो चाहे त्यस्तै निर्णय गर्नसक्ने नेता एकाएक अल्पमतमा पर्नुभयो । पार्टीभित्र पदाधिकारी, स्थायी कमिटीमा अल्पमत, ७७ मध्ये ४२ जिल्ला कमिटीको नेतृत्व माधवजीसँग छ । एमालेलाई पुनर्संगठित गर्न उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो छ नि ।
हामीले यसो गर्नु स्वाभाविक हो । किनकी हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन बेठीक हो भन्यौं, जनताको बीचमा गयौं । अदालतले पनि त्यही भन्यो र संसद पुनस्र्थापित भयो ।
त्यसैले यो बाँकी अवधिका लागि माओवादी, कांग्रेस, जसपाको सरकार बनाउँछौं, देशको विकास, समृद्धि, सुशासन कायम गर्न उपयोग गर्छौर्ं भन्नु नेचुरल (प्राकृतिक) हो । त्यसका लागि कोशिस पनि गरिरहेका छौं ।
जसपाको तीनबुँदे शर्तप्रति प्रधानमन्त्री ‘सकारात्मक’